DHEGEYSO: SILAC & BALANBAL… Haween & carruur Soomaaliyeed oo ku duruufaysan dalka Liibiya | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DHEGEYSO: SILAC & BALANBAL… Haween & carruur Soomaaliyeed oo ku duruufaysan dalka...
DHEGEYSO: SILAC & BALANBAL… Haween & carruur Soomaaliyeed oo ku duruufaysan dalka Liibiya
(Triboli) 31 Okt 2019 – Sanadkii 2018-ka, tirada dadka qaxootiga ah, ama dib u laabanaya, ama aan lahayn dal, iyo kuwa ku barakacay gudaha dalkooda ayay hay’adda qaxootiga ee UNHCR waxa ay ku sheegtay inay kor u dhaafeen ku dhowaad 71 milyan oo qof.
Barnaamijka waxaa soo diyaarisay Caasho Ibrahim (Caasho Cuud).
Previous article”Yaa ku amray inaad alaab cusub iisoo gaddo!” – Arag anshaxii uu ciidamada ku abaabin jirey Jen. Daa’uud (AUN)
Next articleIlhaan Cumar oo ka hor timid sharci lagu ”ulaynayay” Turkiga (Shacabka Turkiga oo amaan u jeediyay)